Cyclone_IVAN :ireo SISAM-PATY | GAZETY_ADALADALA
Cyclone_IVAN :ireo SISAM-PATY
Posted on 21/02/2008 by gazetyavylavitra
Sisam-paty no fialazan-tsika Malagasy ny olona na zavatra avy nisedra ny mafy toy ireny avy nosedraina tamin’i IVAN ireny. Na dia voalaza fa tsy nisy azany maty tany Sainte Marie dia aleo indramintsika ihany io fiteny io hatao lohateny.
Tonga omaly alina avy any Sainte Marie ilay vehivavy niantso ny rainy taty Antananarivo. Izy mivady izay tsy iza fa mpitantana ny hotely Antsara no niara-nody, ka ny raiamandreniny avy aty an-drenivohitra no nanefa ny saran-dalana tamin’ny Air Madagascar satria tsy nisy noraisina intsony izy ireo. Rava fananana tanteraka. Tamin-dranomaso no nilazan’i Laurent (vadin’i Judith ilay vehivavy niantso) fa voatery nilaozany any tsy misy mpiahy, tsy misy « hoavy » (avenir incertain) ireo mpiasany. Mora hoy izy ireo ny mitantara izay nitranga, fa ny niaina azy no tena faran’izay mafy. Ary tsy hay eritreretina mihitsy.
Raha vao nanomboka nisasaka ny alin’ny sabotsy dia nitsoka mafy ny rivotra, nihovitrovitra ny be ny bungalows. Afaka mba nivoaka ny trano ihany izy ireo talohan’ny nidabohan’ilay hazo nandrava ny trano nisy azy . Nihazakazaka tanaty rivotra sy orana nankany amin’ilay restaurant Antsara mba hialoka tao. Niantsoantso tamin’ny feo mafy nandritra izany fotoana izany mba hanaitra ny mpiasa rehetra. Marihana fa ankoatra azy mivady ireto dia fantatra izany izao fa zaza 2 taona, 4 taona, 6 taona, 12 taona ary 21 taona hafa miampy mpiasa iray antsoina hoe Doris no tavela farany tao.
Voalazan’ny rainy (RABENATOANDRO Simon) fa antso 150 no nataony mba hilàna vonjy tamin’izay rehetra afaka nantsoina (miaramila sy tompon’andraikitra sivily maro), saingy indrisy. 70 ora niainan’izy mivady tanaty ahiahy sy tebiteby, teo ampiandrasana izay nahazo an-janany no takalon’izany. Zanany fahatelo i Judith.
Raha iverenana ny tantaran’i Sainte Marie sy Judith ary Laurent dia olona folo izy ireo tany ampiandohana, saingy rehefa samy nikaroka izay haleha dia lasa any amin’ny toeran-kafa ny roa, ka valo sisa tavela tao an-toerana, dia izy mivady sy iretsy voalaza ery ambony. Tany anaty toilett (1m²) no nisitrika, niaro tena aloha. Ary tao no nandefasany ilay antso tokana nankany amin’ny rainy. Tapaka nanomboka teo ny fifandraisana. Tanaty korontan-javatra nandritry ny adiny 8 no niandrasana izay ho tohin’ny tantara. Nandeha nila vonjy tany an-tanandehibe i Laurent ny Alatsinainy taorian’io. Ny sisa kosa nijanona tao Sainte Marie niandry. Sisan-kanina tao amin’ny restaurant sy papaye latsaka teny amin’ny tany no sakafo nivelomana nandritra izany rehetra izany. Ary tsy nisy intsony mandra-piverin’i Laurent avy nitady vonjy.
Rava daholo rehefa mety ho (cases en falafa) trano falafa, tapaka rehefa hazo.
i Laurent sy Judith no hany olona afaka niala tao Sainte Marie hatramin’izao, raha ny filazany, rehefa tsy maintsy nisaraka tamin’ireo olona enina niara-nizaka ny mafy taminy.
Tsy maintsy manomboka amin’ny tsy misy indray izany izao ny fiainan’izy mivady taorian’iny IVAN iny. Ary mbola mampiasa saina an’i Laurent ny ampitson’ireo mpiasany, izay hany fivelomany ny asa tao amin’ilay restaurant Antsara
Filed under: tapatapany | Tagged: Antsara, catastrophe, cyclone IVAN, Sainte-Marie |
« Cyclone_YVAN Fialan-tsiny Tra-boina ao Anosizato Andrefana »